Thursday December 17, 2009 - 09:21:45 in Community Listing by Super Admin
Waxaa Maalinta Jimcaha ahayd ee bishu ahayd 12/04/2009 lagu guulastey in Macalinka dugsiga dhigayey ee burada qabey laga jaray burdii waynayd ee dusha kaga tiilay. Waxaana lagu guulasytey in dhamaan buradii dhan laga saarey dusha. Waxuuna ku jiraa b
Waxaa Maalinta Jimcaha ahayd ee bishu ahayd 12/04/2009 lagu guulastey in Macalinka dugsiga dhigayey ee burada qabey laga jaray burdii waynayd ee dusha kaga tiilay. Waxaana lagu guulasytey in dhamaan buradii dhan laga saarey dusha. Waxuuna ku jiraa bogsiimo deg deg ah marka waxaa laga yabaa inuu dib ugu noqdo bisha Janaayo inuu ju soo laabto dalka
Waa kanaa markii aan Maqalney Xanuunka Macalinka iyo sheekadiisa.
Walaalkaa oo dhiban fadlan caawi… buro ayaa waxa ay ugu taalaa qoorta.
By Mohammed Ibrahim Ayaanle
lulyo 25, 2009 Muqdisho (QOL) Macalin Xasan Daahir Axmed waa Macalin Dugsi Quraan ku haya Magaalada Muqdisho waxa uuna ku dhibanyahay xanuun haya mudo dheer kaa oo ah mid aad fudud in wax laga qabto.
Macalin xasan waxa uu dhashay 1949 waa 60-sano jir waxa uu ku dhashay gobolka Baay gaar ahaan magaalada Baydhabo waxa uuna haatan ku suganyahay Magaalada Muqdisho halkaa uu ku hayo Dugsi Quraan.
Waxa uu aad ugu xanuunsanyahay buradaan haatan uga taala dhanka danbe ee qoorta waxa ayna ku heysaa xanuun xooga waxa uuna ka codsanayaa dhamaan shacabka soomaaliyeed cidii wax la qaban karto ninkaas dhiban waxa uu la soo xariiri karaa macalin xasan si toos ah ama waxa uu kala soo xariiri karaa canaawiintaan hoos ku qoran.
Xafiiska Wararka ee Toronto, Canada